အချစ်သူခိုး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အချစ်သူခိုး
Posted by မောင် ပေ on Sep 13, 2011 in Creative Writing, Think Different | 12 comments
တစ်ခြားပို့ စ် ကို ကျော်ဖတ်ကြပါနော်
သုတေသီ တော်တော်များများ က ဆိုထားတာ
အချစ် ဆိုတာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် မှာ အချစ် ဆိုတာ နဲ့ တွေ့ ဖို့ တော်တော်များတယ်
ရေမိုးချိုး ပြီးတာ နဲ့ 
ကန်တင်းမှာ ဘော်ဒါ တွေ နဲ့ ဆုံမယ်
ကျောင်းတက်ရင် လဲ တက်ဖြစ်မယ်
ဘော်ဒါ တွေ နဲ့ လစ်ရင်လဲ လစ်မယ်
ကောင်လေး က ကောင်မလေး ချောရင် ရည်းစားစကား ပြောလိုက်တာပဲ
ကောင်မလေး က လဲ ကောင်လေး ကို လက်ခံ နိုင်ရင် လက်ခံ လိုက်မှာပဲ
အချစ်ကြီး ချစ်ကြသူတွေ ကြတော့ လဲ ညားကုန်ကြတာပေါ့
အရေးကြီးတဲ့ အချက် ကို သုတေသီတွေ ရေးထားတာ ဖတ်ဖူးသေးတယ်
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ကျောင်းသူ အရွယ်မှာ
အိမ်ထောင်ပြု ဖို့ တော်တော် စဉ်းစားကြလိမ့်မယ် တဲ့
မှန်မယ် လို့ ထင်ပါတယ်
စာဖတ်သူတွေ ကော ဘယ်လို ထင်ပါသလဲ …။
လွတ်လပ်စွာ သဘောထား ကွဲလွဲ ကြပါ
လူပျိုကြီး ၊ အပျို ကြီး တွေ က ဇီဇာ ပို ကြောင်လာတာ ကို တွေ့ မြင် ကြရမှာပါ ။
ကိစ္စလေး တစ်ခု ပြောချင်ပါတယ် ။
`မောင်လေး…မောင်လေး ၊ အမ ကဗျာတွေ အခိုးခံ ရသကွယ်´
` အမ ကိုယ်တိုင် ခံစားရေးဖွဲ့ ထားတဲ့ ကဗျာ တွေ ( အချစ်ကဗျာ တွေ များတယ် ) ကို သူများခိုးသွားတယ် ´
` ဟောဗျာ…အမ က ဘယ်မှာရေးတာလဲ ´
` အင်တာနက် ထဲ မှာ ´
` ဟောဗျာ…နှမြောစရာ ကြီးဗျာ ၊ ဒါနဲ့ အမ ကဗျာ တွေ ခိုးသွားတဲ့ သူကို အမ သိလား ´
` သိတယ်….သူလဲ မိန်းမ တစ်ယောက် ပဲ ၊ သူ ယူသုံးချင်ရင် အမနာမည် ပါ ဖော်ပြပေးပေါ့ ၊ အခုတော့ သူ ပဲ ရေးထားတာလိုလို နဲ့ ´
` အင်း…ခက်တော့ ခက်နေပြီ ၊ ကျွန်တော် က လည်း ဘာကောင်မှ မဟုတ်တော့ ၊ အမ ပြဿနာ ကို ဘယ်လို ရှင်းပေးရမလဲ မသိတော့ဘူး ´
` ရပါတယ် ကွယ်..အမကဗျာ တွေ အခိုးခံရတဲ့ ဟာ ၊ မောင်လေး မရှင်းပေးနိုင်တာ သိပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် မောင်လေး သိအောင် ပြောပြရုံသပ်သပ်ပါ ´
` ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ ၊ ကျွန်တော် လည်း အချစ်ကဗျာ ဆိုရင် တော်တော် လေး ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်….နောက်ကို အဲဒီ သူခိုးမ ကို တွေ့ ရင် ၊ တစ်ခြားလူတွေ ကို ပါ လက်တို့ ပေးပါ့မယ် ´
` အင်း….ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကွယ် ´
` ရပါတယ် ဗျာ….မကောင်းမှု ကို အားလုံး အတူတူ တိုက်ထုတ်ရမှာပါပဲ မလား ´
သို့ နှင့် ထိုအမျိုးသမီး ပြန်သွားသည် ။ သူမ ၏ နာမည် မှာ ရှမ်းရှမ်း ဖြစ်သည် ။
` သြော်…နောက်ကို ထပ်အခိုးမခံ ရအောင် ၊ သူခိုးမ ကို ဖော်ထုတ်မည် ´ ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် ။
ဆိုစကား ကို ကြားဖူးသည်
ငယ်စဉ် ကျောင်းသားဘ၀ ကတဲ က
သမီးရည်းစား အချင်းချင်း စကားများလျှင်
ကိုယ့်စကား ကို နားမထောင်လျှင်
ထို အသိခေါက်ခက် အ၀င်နက် ဆိုတာ ကို သုံးမိသည်
ယခု မှ သိမိတော့သည်
လူတိုင်း အတွက် ရင်ခုန်စရာ
လူသားတိုင်းအတွက် ကိုယ်တိုင် ဇါတ်ညွှန်းရေး ၊ ကိုယ်တိုင် ဒါရိုက်တာ ၊ ကိုယ်တိုင် သရုပ်ဆောင်ရသော ဇါတ်ကား
ထို့ ကြောင့် အချစ်နှင့်ပတ်သက်လျှင်
လူတိုင်း သတိရှိမှ ဖြစ်မည်
¶…ဂယ်ချိုရင် $ ပဲ..လိုဒယ်..
ဘာကြောင့် တတ်တိ မချိလဲဂွယ်….¶
¶…ပေါင့်ဘက်က မှားတာဘာ….ပေါင့်ဘက်က မှားတာဘာ..¶
¶..ဒို့ ကတော့.ဒို့ ကတော့…ဒို့ ကတော့ မိန်းမမရရင် ဘုန်းကြီး ၀တ်မယ်….¶
ဟားဟား ဟားဟား .. ကိုပေတို့ကတော့ တကယ့်ကို ဥာဏ်ပြေးတယ် .. ရေးလိုက်လျှင် တဲ့တဲ့တွေရော … စောင်းစောင်းတွေရောပဲ ….. ။ ဘယ်သူကူးတာလဲ မသိပေမဲ့ … ကူးခံရတဲ့လူကလည်း သူများဆီတဆင့်ပြန်ကူးလာတာ မဟုတ်လျှင် တော်သေးတယ် ..
ကျောင်းတတ်တုန်းက သိပ်စိတ်ကူးမယဉ်ခဲ့ဖူးဘူး … ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ .. ငယ်ငယ်ကတည်းကတွေးထားတာ … အချစ်က ကစားစရာမဟုတ်ဘူးလို့လေ …. ။ စိတ်ခံစားမှူ အပိုင်းကို အလေးပေးတတ်တဲ့ လူမို့လို့ .. တွေ့တဲ့လူလည်း မချစ်နိုင်သလို ….ရေတက် ငါးဇရိုင်းလည်း မလုပ်ချင်ဘူးလေ …။ အထူးသဖြင့် မိန်းမဖြစ်နေတော့ ပိုဆိုးတယ် ….. ရည်းစားတစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက်ထားလို့ကလည်း လွယ်တာမှ မဟုတ်တာ… ယောကျာ်းမရပဲ နာမည်ပျက်နေမှဖြင့် … ။ သေချာအလေးနက်စဉ်းစားပြီး …တွဲမိတဲ့လူက .. ခါးပိုက်ပိုက်မှ မြွေပွေးဖြစ်နေတဲ့အချိန် … ကျွန်မတွေဝေမနေပဲ … ခွဲခွာခြင်းဆိုတဲ့လမ်းကို ရွေးခဲ့လိုက်တယ် … အတည်တကျမယူချင်တဲ့ လူကို စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး မျှော်လင့်ချက်နဲ့ …တွဲတဲ့ မိန်းမရှိရိုးလားဟင်…. (ရှိကောင်းရှိမှာပါ .. ) သို့သော် စိတ်မောပါတယ် … ။ ပင်ပန်းစိတ် ဒုက္ခရောက်တာထက်စာလျှင် လွတ်လိုက်တာကောင်းသေးတယ်ဆိုတာမျိုး တွေးမိခဲ့လို့ …
နောက်တစ်ယောက်နဲ့ဆုံတဲ့အခါ … မျှော်လင့်ထားသလို …မယိုင်မလဲ တည်ငြိမ်တဲ့ အချစ်မျိုး ရခဲ့တယ် … ။
မေပေါင်ပိုစ့်မှာ etone ကြော်ငာဝင်သွားပါတယ် ……….:p
” ရည်းစား ၂ယောက်ရှိရင် ရည်းစား၂ယောက်ရှိရင် တိတ်တ်ိတ်ပီးတော့ ကောင်းမှာဘဲ” ;) (တယောက်အခိုးခံရလဲ စပယ်ယာကျန်တာပေါ့။ မှတ်ချက်။ ။ ကားစပါယ်ယာမဟုတ်ပါ)
ကျောင်းတက်ချိန်တွေကို လွမ်းတယ်။ လေးနှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလက အရမ်းကို တိုတောင်းသလိုခံစားရတယ်။ RC2မှာ တက်ရတဲ့ အချိန်တွေကို ပိုသတိရတယ်။ မိန်းထဲမှာ အဖွဲ့လိုက် ဝေးလားဝါးလား လုပ်ခဲ့တာတွေလည်း ခုချိန်တိုင် မမေ့သေးဘူး။
သိပ်ကောင်းတယ်..လို့ ပဲ..ပြောတော့မယ် ။ အချစ်အကြောင်းတွေကို များများတင်ပေးပါဦး။ ကိုယ် လည်း လူပျိုကြီး ဘ၀ ကို နည်းနည်း စိတ်ကုန်လာလို့။
အဲဒီလူ ကို လူကြားထဲ မှာ ၊ အမျိုးတွေ ကြားမှာ
ကွယ်ရာမှာတော့ ဇီဇာကြောင်တဲ့ သူ
ဂေါ်မစွံ ၊ အသိုးကြီး လို့ တော့ ခေါ်တယ်ဗျို့ ။
နောက်မှ ပေါက်သွားတာ ဒါက “ကလောင်ခွဲ”ထားပြီး
ရွာထဲမှာလဲတင် အခြားဆိုက်မှာလဲတင် ခွဲတာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ တွေးမိလိုက်တာပေ့ါ။
အဲလို ဟုတ်မဟုတ်တော့ ကာယကံရှင်အသိဆုံးပေါ့။
တစ်ယောက်ထဲ လို့ ဝင်ခံလာရင်တော့